Kwenziwe ngentando i-adaptha ye-PCBA Factory, Abakhiqizi nabahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > I-adaptha PCBA
12V1.5A i-adaptha PCBA
I-adaptha ye-12V1.5A PCBAUma nje usitshela izidingo zakho zokusebenza, onjiniyela bethu bazokunikeza ngezixazululo zokuklama, ukuthuthukiswa nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama kunoma yisiphi isimo nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ngokwezifiso, futhi siyazi ukuklama nokukhiqiza izinto ze-elekthronikhi ezidinga ubuchwepheshe nobungaguquguquki. Ukukhiqizwa kwethu kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele, kungakunika ikhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki kwemikhiqizo.
12V1A i-adaptha PCBA
I-adaptha ye-12V1A i-PCBAI-adaptha ye-PCBA Uma nje uzositshela izidingo zakho zokusebenza, onjiniyela bethu bazokunikeza ngezixazululo zokuklama, ukuthuthukisa nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama kunoma yisiphi isimo nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ngokwezifiso, futhi siyazi ukuklama nokukhiqiza izinto ze-elekthronikhi ezidinga ubuchwepheshe nobungaguquguquki. Ukukhiqizwa kwethu kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele, kungakunika ikhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki kwemikhiqizo.
9V1A i-adaptha PCBA
I-adaptha ye-9V1A i-PCBAI-adaptha ye-PCBA Uma nje uzositshela izidingo zakho zokusebenza, onjiniyela bethu bazokunikeza izixazululo zokwakha, zokuthuthukisa nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama kunoma yisiphi isimo nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ngokwezifiso, futhi siyazi ukuklama nokukhiqiza izinto ze-elekthronikhi ezidinga ubuchwepheshe nobungaguquguquki. Ukukhiqizwa kwethu kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele, kungakunika ikhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki kwemikhiqizo.
5V2A i-adaptha PCBA
5V2A i-adaptha PCBA i-adaptha PCBA Inqobo nje uma usitshela izidingo zakho zokusebenza, onjiniyela bethu bazokunikeza ngezixazululo zokwakha, zokuthuthukisa nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama kunoma yisiphi isimo nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ngokwezifiso, futhi siyazi ukuklama nokukhiqiza izinto ze-elekthronikhi ezidinga ubuchwepheshe nobungaguquguquki. Ukukhiqizwa kwethu kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele, kungakunika ikhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki kwemikhiqizo.
5V1A i-adaptha PCBA
I-adaptha ye-5V1A i-PCBAI-adaptha ye-PCBA Uma nje usitshela izidingo zakho zokusebenza, onjiniyela bethu bazokunikeza izixazululo zokwakha, zokuthuthukisa nezokukhiqiza. Singakwazi ukuklama kunoma yisiphi isimo nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ngokwezifiso, futhi siyazi ukuklama nokukhiqiza izinto ze-elekthronikhi ezidinga ubuchwepheshe nobungaguquguquki. Ukukhiqizwa kwethu kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele, kungakunika ikhwalithi ezinzile nokusebenza okungaguquguquki kwemikhiqizo.
Thenga i- I-adaptha PCBA yethu ingajabulela insizakalo esezingeni eliphakeme, uvune intengo ephansi yemikhiqizo yekhwalithi. Inkampani yethu ingumkhiqizi oqeqeshiwe nomhlinzeki we- I-adaptha PCBA, sinikezela ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso, eChina inezinto zokusebenza ezinhle zokukhiqiza kanye nobukhomanisi. Ngibheke phambili ekuvakasheni kwakho ~